Xa useSolo-Laweyan, Solo
Ifama sinombuki zindwendwe onguDjodi
Xa eSolo ibuyiselwa indlu yekoloniyali yeJava ebekwe kwiSithili seBatik saseSolo esibizwa ngokuba yiLaweyan.
Ngaphambili le ndlu yayiyeyomenzi weBatik nomrhwebi kangangezizukulwana. Yindawo efanelekileyo yokufumana ubomi obuzolileyo, obupholileyo kunye nokulahleka ngexesha losapho lwaseJavane kwaye ujonge iSolo ngembali yayo etyebileyo kunye nenkcubeko.
Yonwabela impepho epholileyo ethafeni ngesandi seentaka zePerkutut kunye nomculo wesintu ovakala kumoya opholileyo wentsasa yeSolo kwaye uhambe ngeendlela zaseLaweyan.
Zama ukutya okwahlukeneyo kukaSolo kwigumbi lokutyela elihonjiswe ngokusulungekileyo laseJavanese okanye kwindawo evulekileyo yekhitshi yekoloniyali kwindawo yokutyela i-allfresco okanye iti yasemva kwemini. I-Solo likhaya lokutya okuhlukeneyo kwelifa okubandakanya i-Bakmi Jawa, i-Tongseng, i-Sate Buntel, i-Ledre, i-Selad Solo, i-Tengkleng, i-Garang Asem, kunye ne-Wedang Ronde,. Ikhitshi lixhotyiswe ngezixhobo kunye nendawo yokupheka ukuzalisekisa iminqweno yakho yokupheka.
Ndwendwela abenzi beBatik abaninzi kwilali yaseLaweyan kwaye ubukele ubuhle, ifilosofi, kunye nenkqubo yokwenza iBatik. I-Laweyan yeyona ndawo ifanelekileyo yokuqonda ngcono imbali yokwenza i-batik kunye namabali asemva kweepateni ezininzi kunye nesimbo se-batik. Jonga ngakumbi abenzi beBatik abadumileyo kwiSolo ababandakanya iGo Tik Swan, uDanar Hadi, iBatik Keris, kunye neBu Geloh. Gqibezela usuku kwiThala leencwadi ngengqokelela yeBatik kunye neencwadi zobugcisa zaseIndonesia.
Umbuki zindwendwe ngu- Djodi
Le Ndlu iza kuzinyaswa siSibini saseJavane njengabadlali abakhethekileyo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Laweyan